नेपालदृष्टि । २०७९ साल बैशाख ३० गते सरकारले स्थानिय चुनावको मिति तय गरेसँगै मुलकका बिभिन्न जिल्लामा विभिन्न तयारीकासाँथ चुनावी माहोल तातिदै छ । यसै क्रममा मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाको चुनावी माहोल पनि दिनादिन तातिदै गरेका छ । बजारका चौक र चिया पसलहरुमा नगर प्रमुख, बडा अध्यक्ष र सदस्यहरुको उम्मेदवारी बारे चर्चा परिचर्चा बढो कौतुहलताकासाँथ भैराखेको देखिन्छ । यसै क्रममा चर्चामा पार्टीका दुई पक्ष नेपाली कांग्रेर र नेकपा एमालेवीच प्रतिस्पर्धी देखिन्छन ।
यस्तै रतुवामाईको वडा नं.८ को वडा अध्यक्ष पदको सम्भावित उम्मेदवारीमा नेकपा ऐमालतर्फ तत्कालिन गाविसको वडा अध्यक्ष समेत भैसकेका सालिन राजनीतिक ब्यक्तित्व एवं पार्टी जिल्ला कमिटी सदस्य समेत रहेका उम्मेदवार प्रत्यासी हरि राइको पनि उत्तिकै चर्चा छ । तर हरि राई आफै चै त्यति यो दौडमा सामेल भएका देखिदैनन । पार्टी ले जिम्मेवारी दिए कुशलता पूर्वक जिम्मेवारी समाल्न सक्ने नेतृत्व भित्र पर्दछन हरि राई। अर्का सम्भावित उम्मेदवार वडा नं. ८ का वडा कमिटी अध्यक्ष योगेन्द्र अर्याल पनि यो दौडमा निक्कै चर्चामा छन। वडाका गतिबिधिमा पनि सक्रिय नेता हुन अर्याल ।
हिजो नेकपा हुदाको समयमा वडा कमिटी अध्यक्ष समेत रहेका भुबन कार्की पनि वडामा उत्तिकै चर्चामा छन । उनी साथिभाइको सहयोग भए जनतासग जोडिएर काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरामा विश्वास राख्छन ।
त्यस्तै अर्का सम्भावित उम्मेदवारीमा रहेका राजु सापकोटा वडामा हुने राजनैतिक तथा सामाजिक गतिबिधिमा निरन्तरनै छन। नूतन कार्यशैलीको प्रस्तुतिकरणको माध्यम्बाट युवावर्गमा लोकप्रियता र विश्वास कमाई सकेका सापकोटा यस उम्मेदवारीप्रति पर्णरुपले हक राख्न सक्ने हैसियतका राजनीतिक कर्मी हुन ।
वडा नंं.८को लागि सम्भावित उम्मेदवारीमा जति धेरै आकांक्षी त्यति धेरै पेचिलो पनि बन्दैगरेको देखिन्छ । तर पनी पछिल्लो समय बालकृष्ण ढकालको कोतुहलपूर्ण बढी चर्चा परिचर्चा देखिन्छ । २०४७ सालदेखी जनता क्याम्पस बिराटनगर को प्रा.क. सदस्य बाट राजनितीक यात्रा सुरु गरेका ढकाल २०४९ सालमा अनेरास्ववियू पुर्बी इलाका कमिटी अध्यक्ष हुँदै २०५० सालमा अनेरास्ववियुको जिल्ला कमिटी सदस्य बनेका हुन । जसका कारण ढकाल युवा तथा बिद्यार्थीहरुको माँझमा लोकप्रियता र विश्वास हासिल गरेका बिद्यार्थी नेता पनि हुन।
पछिल्लो समय पार्टी बिभाजन हुदा मालेको क्षेत्रीय कमिटी सदस्य र प्ररायु संघ जिल्ला कमिटी सदस्य समेतमा रहेर काम गर्दा आफ्नो मातहतको कमिटीमा आबद्द गराएका नेताहरु आज एमालेकै प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीमा पुग्न सफल भएको कुरामा उनी तरंगीत छन ।
पारिबारिक कारणले निकै ढकाल लामो समय काठमाडौमा बसे । तर पनि उनी पार्टी सम्पर्क मा रहेर एमाले पार्टी काठमाडौ क्षेत्रनं.४ को क्षेत्रीय कमिटीमा समेत रहेर जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिसकेका ढकाल सफल नेतृत्वकर्मी हुन ।
२०७४ को स्थानिय निर्बाचनमा पार्टीलाई भोटमाग्दै गाँउ घरमा आफ्ना उम्मेदवार र पार्टीलार्ई विजयी बनाउँन आफ्नो तर्फबाट महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको ढकाल बताउँछन ।
पार्टी भित्र देखिएको साङ्गठनिक अराजकता र गुटबन्दी को बिरोधिको रुपमा आफु सदैव लाग्ने गरेको बताउँने ढकाल सवैसँग भाईचाराको सम्वन्ध राख्न चाँहान्छन ।
युवाहरुनै यो मुलुकको परिबर्तनको बहाक शक्ति भएकोले युवाहरुहरुलाई बिस्वास गरेर कामको जिम्मा दिदा त्यो युवा शक्तिले सजिलै काम गर्नसक्छ भन्ने पुर्ण बिस्वास राख्ने ढकाल आज आफ्नो नगर भित्र बेतिथी बढेको, भ्रष्टाचारले सिमानाघेको कुरामा ज्यादै नै मन दुःखाउँछन ।
हामीले नेपाली जनतालाई हिजो एमाले बनाइरहदा जुन कुराको प्रतिबद्दता गरेका थियौ त्यो पूरा गराउन स्थानिय तहमा समेत सकेनौ। सन्जाल यसको अर्थ सञ्जाल निकै दह्रो रहेछ । तर पनि त्यसलाई चुडाएर जानुको बिकल्प छैन । यसमा जनताको साथ पाएमा निर्मुल पार्न सकिने कुरा ढकाल बताउँछन ।
क्षेत्रीय सदस्य समेत भएका ढकाल पेन्डामिकका कारण जनमानसमा खुलेर काम गर्न पाउँन नसकेको बताउँछन । अहिले दोस्रो भ्यारेन्टपछि आफ्नै थाकथलोमा आएर काम गर्ने तिब्र इच्छा रहेको बताउँछन। त्यसैले होला उनी अहिले पार्टीको जनजागरण अभियानको अभियान्ता भएर सकृय ढङ्गले लागेको देखिन्छन।
वडा न ं.८ कम्युनिष्टहरुको वाहुल्यता रहेको भए पनि मतदाताको मल्यांकन अनुसार बरावरीनै मान्न सकिन्छ । आफ्नो तर्फको पूर्ण शक्ति वडा नं.८ मा काङ्ग्रेसले लगाईरहेको देखिएको छ । अर्को तर्फ काङ्ग्रेसमा प्रवेशको लहर चलिरहेकोले यसपालिको चुनाबमा एमालेलाई पनि त्यति सजिलो भने छैन।